ရေချိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအပန်းပြေသွားအောင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပင်ပန်းလာခဲ့တဲ့အတွက် ညနေဘက်မှာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ပြန်လည် လန်းဆန်းဖို့ တစ်ခုခု လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ညပိုင်းမှာ ရေချိုးလိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ခံနိုင်စွမ်းရည်အားကို ပြန်လည် မြင့်တက်လာစေပါတယ်။
ညပိုင်းမှာ ရေချိုးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အယူအဆကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေက ဒီလိုရေချိုးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိခိုက်စေမယ်၊ ဖျားနာမှုနဲ့ ရောဂါတွေ ရရှိနိုင်မယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ပညာရှင်များကတော့ ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်သလားဆိုတဲ့ အဖြေကတော့ “နိုး(No)” တစ်လုံးတည်းပါတဲ့။
ညဘက်မှာ ရေချိုးလိုက်လို့ ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထားများ မတွေ့ရှိရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘယ်လို အကျိုးရှိသလဲ . . .?
ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးလိုက်ရင် အရေပြားပေါ်ရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးကာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါတယ်။ မအိပ်ခင်မှာ လန်းဆန်းပြီး သန့်ရှင်းနူးညံ့တဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိစေပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု သက်သာစေပြီး သွေးပေါင်ချိန် လျော့ကျစေပါတယ်။ တစ်နေကုန်ပင်ပန်းလို့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အင်အားတွေကို ဖြည့်ပေးပါတယ်။ တစ်နေကုန်ပင်ပန်းလာပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်တောင် တောင့်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေဟာ ရေချိုးခြင်းဖြင့် ဖြေလျော့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေနွေးနဲ့ ချိုးလိုက်ရင် အရေပြားကို ချောမွတ်ပြီး ပျော့ပျောင်းစေကာ ရေချိုးပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် နုပျိုလန်းဆန်းခြင်းကို ခံစားရရှိစေသည်။
ရေချိုးနေစဉ် အချိန်လေးအတွင်းမှာပင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပျောက်ကွယ်ကာ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အံ့ဖွယ်အချက်တစ်ခုကတော့ ညဘက်ရေချိုးခြင်းက ကောင်းသော ကိုယ်သင်းရနံ့ကို ပေးပါတယ်။ အသားအရေ နူးညံ့တဲ့ ခံစားမှု သန့်ရှင်းတက်ကြွခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော ကိုယ်သင်းရနံ့ တို့က အိပ်ရာဝင်ချမ်းသာသုခကို အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။
အိပ်မပျော်ခြင်း၊ မျက်စိကြောင်ခြင်းများ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အလုပ်မှာ ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီး ချွေးသံတရွှဲရွှဲနဲ့ တန်းမအိပ်ပါနဲ့။ ရေချိုးခြင်းက စိတ်ရောကိုယ်ပါ အပန်းပြေစေတဲ့အတွက် ခွန်အားသစ် ပြန်လည်ရရှိအောင် ရေချိုးပါ။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းလဲလာတာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ညဘက်မှာ ရေချိုးရင် ဒါလေးတွေတော့ သတိထားပါ!
ခေါင်းလျှော်ရင် မအိပ်ခင်မှာ ခြောက်အောင် သုတ်ပြီးမှ အိပ်ပါ။ မိမိကိုယ်အပူချိန်ဟာ နေ့ခင်းဘက်မှာထက် လျော့ကျနေတာကို သတိပြုပါ။
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ချင်လို့ ရေချိုးတာဆိုရင် မအိပ်ခင်လေးမှာ ရေချိုးပါ။ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကာစမှာ ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျယ်နေတဲ့အတွက် ချက်ချင်းရေတန်းမချိုးပါနဲ့။ မိနစ် ၃၀ ခန့်စောင့်ပြီး ကိုယ်အပူချိန်လျော့ကျသွားကာ ချွေးပေါက်တွေပြန်ကျဉ်းသွားတဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်မှာ ရေချိုးပါ။
ညဘက် အတော်နောက်ကျမှ ချိုးရင် ရေနွေးနဲ့ ချိုးပါ။ ရေနွေးနဲ့ မချိုးခင်မှာ ရေအပူချိန်ကို လက်နဲ့ ထိတွေ့ခံစားကြည့်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ ကိုယ်အပူချိန်ထက် ငါးဒီဂရီပို၍ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သာမန်အပူချိန်ကတော့ ၉၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၊ ၃၆ ဒီဂရီ ဆာဆီယပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်လက်ခံနိုင်တဲ့ မပူလွန်း မအေးလွန်း အနေအထားကို ရယူပါ။
ရေချိုးခြင်းဟာ ကိုယ့်နဲ့စိတ်ကို သဘာဝအတိုင်း ပြန်လည် လန်းဆန်းတက်ကြွအောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အိပ်ပျော်ရုံ မဟုတ်ဘဲ အိပ်မောကျ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်အောင် အထောက်အကူပေးပါသည်ဟု တင်ပြလိုက်ပါသည်။